Helitaanka bulshada iskaa wax u qabso - Cunnooyinka Taayirada
Helitaanka bulshada iskaa wax u qabso
Abriil waa Bilaha Iskaa wax u qabso. Waad ku mahadsan tahay kumanaanka mutadawiciinta ah ee ka dhigay cuntooyinka ku socda wheels ee suurtogalka ah! Waxaan halkan ku wadaagaynaa dhawr sheeko si aan u muujinno shaqadooda cajiibka ah.
Xagaagii hore, Cordelia Henderson waxay dareentay inay wax maqan yihiin. Kaligaa noolasha inta lagu jiro aafada, may dareemayn in ay ku xidhantahay bulshadeeda sida ay rabto. Dabadeed waxay aragtay qoraal online ah oo ku saabsan baahida loo qabo mutadawiciinta Cunnada ee Wheels waxayna ogaatay waxay ahayd inay samayso.
"Waxaan ku sugnaa guriga halkan gurigayga, waxaana dareemay cidlo," ayay tiri Cordelia. “Waxaan shaqo tabaruc ah ka qaban jiray wasaaradda dharka. Waxaan u baahanahay inaan helo wax kale oo aan ku lug yeesho."
Cordelia, oo ku nool badhtamaha magaalada Minneapolis, waxay isla markiiba si mutadawacnimo ah ugu shaqaynaysay barnaamijka Cunnooyinka Wheels ee xaafadeeda Adeegga Gurmadka Bulshada (CES). Waa qayb joogto ah oo usbuuca ka mid ah hadda.
Waxay keentaa waddo isku mid ah todobaadkii laba jeer Waqooyiga Minneapolis, waxayna soo wacaysaa maalmaha kale ee toddobaadka haddii aanay ballan kale lahayn.
"Waxay ahayd waayo-aragnimo noocaas ah," ayay tidhi. “Waxaan jeclaan lahaa inaad wejigooda arki karto markaad cuntooyinkooda keensato. Waxaan haystaa dhowr qof oo aan isku dayo inaan ka dhigo kuwa ugu dambeeya sababtoo ah waxaan ogahay inay jecel yihiin inay hadlaan. "
Xili loo baahnaa mutadawiciin badan maadaama ay dib ugu laabteen dhalmada maalinlaha ah, dadaalka Cordelia waxa ay ahaayeen lama huraan, ayay yiraahdeen Melanie LaPointe iyo Linda Velez oo labaduba ka shaqeeya isku dubaridka mutadawiciinta CES.
"Cordelia waxay ahayd mid cajiib ah," Melanie ayaa tiri. "Runtii aad bay ugu fiicnayd is-muujinta marka aanu ku yarayn darawalnimada."
Ku saabsan horumarinta xidhiidhka iyada oo loo marayo daryeelka dadka kale
Cordelia waxa ay sanado ka shaqaynaysay kalkaaliyenimo ka hor inta aanay u wareegin shaqo ahaan shaqaale ururiye ka ahaa Honeywell horraantii sagaashamaadkii waxana ay hawlgab noqotay dhawr sano. Waxay korisay lix carruur ah, oo afar ka mid ah ay weli ku nool yihiin aagga oo ay si joogto ah u aragto.
Waxay had iyo jeer ku faantaa inay daryeesho dadka kale, oo ay ku jirto inay tahay daryeelaha aasaasiga ah ee gabadheeda qaangaarka ah, Tammy, oo geeriyootay 2017 sababo la xiriira sunta rasaasta. "Iyadu waa dhiirigelintayda ku saabsan samaynta Cunnooyinka Taayirada," ayay tiri Cordelia.
Inkasta oo qoyskeedu uu dhow yahay, waxay dareemeysaa jiid xooggan oo ay kula xiriirto dadka kale. Cordelia ayaa sheegtay in keenista cunnooyinka ay u ogolaato in ay xoojiso rabitaankeeda ku aaddan daryeelka oo ay barato dadka ku socda waddooyinkeeda (magacyada waa la bedelay si loo ilaaliyo sirta qaataha):
"Waxaan xiriir dhow la yeeshay Dennis. Wuxuu ku noolaan jiray Alaska, wuxuuna ii sheegay dhammaan sheekooyinka ku saabsan qabowga. Waxa uu leeyahay sheeko jiilaal badan oo qosol badan.
"Lisa waxay ku jirtaa ogsijiin. Had iyo jeer way fadhidaa meeshaas aniga oo daaqadda iga sugaysa. Waxay tidhi, 'Maalintayda uun baad ii iftiimisay.'
"Marar badan ayaan u dhiibay Michele waxaanan uga tagay cuntadii qaboojiye albaabka agteeda. Markaa maalin maalmaha ka mid ah, waxaan maqlay 'Waxaa hubaal ah inaad maanta u qurux badan tahay!' Waxay haysataa mid ka mid ah kamaradahaas gambaleelka albaabkeeda! Hadda waxaan hubiyaa inaan wajigayga hoos u dhigo si ay wejigayga u aragto markaan cuntada iska daayo."
Cordelia waxay sheegtay in maalin kasta oo ay waddadeeda ku jirtay farxad. "Waxaad arkaysaa dadku inay ka gudbayaan hal marxalad una gudbayaan heer wanaagsan. Weji-jabka ayaa kaliya u jeestay dhoola cadeyn. Waxaan jeclahay dadkayga aan u dhiibo. Kaliya waan jeclahay ilaa dhimasho.”
Fursadaha lagu gaarsiinayo cuntada ayaa ka jira dhammaan magaalooyinka mataanaha ah, oo leh barnaamijyo u baahan caawinaad dheeri ah maadaama ay sii wadaan u adeegida tiro rikoor ah oo shakhsiyaad ah. Waxaad isku qori kartaa inaad iskaa wax u qabso halkan. Waxa kale oo aad taageeri kartaa shaqada iskaa wax u qabso ee Cunnada Taagerada iyada oo loo marayo deeq.
Abriil 1, 2022